Macluumaadka Shirkadda | ANHUI TANGRUI AQOONSIGA FARSAMADA CO., LTD
Shirkadda: ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE Farsamada CO., LTD
Diiwaangelinta Cinwaanka: 116 # Wadada Fangzheng, Jiujiang Aagga Horumarinta Dhaqaalaha iyo Teknolojiyada, Wuhu Magaalada, Anhui
Shaqaale: 150(Farsamada & Tayada Dep. 30,Soo saar Dep. 100 )
Taariikhda la aasaasay: 2016
Aagga Dhismaha: 40000㎡(Taagga wax soo saarka otal ee saldhigga wax soo saarka degmada Wuhu iyo saldhigga wax soo saarka Wuhu City)
Ganacsiga ugu weyn: Qaybaha gawaarida (Gawaarida guud, dib loo dhigaygawaarida, gawaarida xasaasiga ah,- garoonka diyaaradaha qaybo ka mid ah gawaarida,
sida isteerinka isteerinka, gacanta xakamaynta, gawaarida gawaarida, iyo iwm.)
Qiimaha Soo Saarka 2017: In ka badan Boqol Milyan
ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD (Xarunta Dhexe) waxaa la aasaasay sanadkii 2016 ， kuna yaalay 116 #
Wadada Fangzheng, Wuhu aaga horumarka dhaqaalaha iyo tikniyoolajiyadda, Anhui, oo leh gaadiid ku habboon.
Isku-darka R & D, soo-saarka iyo iibinta, oo leh teknolojiyad casri ah iyo qalab, maamul adag, tikniyoolajiyad casri ah iyo xakameyn tayo leh oo adag. Takhasus ku leh soo saarida jiingadaha isteerinka. Hadda waxaa jira in ka badan 800 oo nooc oo isdabamarin isteerinka ah, oo ay ku jiraan sare, darajada midium iyo minicars. Qaybtayada iibku waxay u qaybsan tahay OEM iyo suuq gadaal (gudaha iyo dibaddaba)
Iyo labada qaybood ee suuqa gudaha iyo dibaddaba, hadda waxay bixiyaan kuraas isdaba joog ah oo loogu talagalay CTCS, Chery, BYD, Geely iyo BAIC.
Waxaa lagu iibiyaa Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo gobollo kale. Waxaan leenahay shabakad iib ah oo ballaaran oo gudaha ah, oo daboolaysa meelaha horumarsan iyo magaalooyinka.
Labada saldhig ee wax soo saar ee shirkaddu waxay gaarayaan aag dhan 40000 mitir murabac ah, oo leh 5 aqoon isweydaarsi: kabka nodular, 2 mashiinka CNC, daaweynta dusha sare iyo horumarinta caaryada Waxaa jira xirmo ah xarig lagu daweeyo ciidda oo aqoon isweydaarsiga ridaya. Awoodda daaweynta bil kasta ee dhalaalida birtu waa 800 tan, iyo awoodda aqoon-isweydaarsiga wax-qabadku waa 200,000pcs / bishii. Aqoon isweydaarsiga daaweynta dusha sare wuxuu si toos ah otomaatig u yahay E-daahan aqoon isweydaarsiga horumarinta mold wuxuu leeyahay koox ka mid ah naqshadeynta caaryada xirfadeed, naqshadeeyayaasha geedi socodka.
Falsafadeyda ganacsi ee shirkadaydu waa "Xirfaddu waxay ku wanaagsan tahay takhasus gaar ah, guulna waxaa lagu gaaraa fikirka" Waxaa naga go'an cilmi baarista iyo horumarinta istiraatiijiga isteerinka, qaadashada tikniyoolajiyadda sida udub dhexaadka.
Cusbooneysiin isdaba joog ah, oo aan ku dadaalno hagaajinta tayada wax soo saarka waa mas'uuliyaddeena. Shirkadda waxaa caddeeyay ISO9000 sanadkii 2007, waxayna ku guuleysatay oo ay hirgelisay maaraynta tayada TS16949 sanadkii 2017.
Wax soo saarka shirkada waxaa laga ilaaliyaa geedi socodka geedi socodka shubista iyo makiinada iyadoo la raacayo heerka nidaamka maaraynta tayada ee ISO / TS16949.
Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto oo aad nala shaqeyso.
Hood Shooga Nuugista, Wadajirka Kubadda Tire, Gawaarida Hub, Naxdinta Nuugista Bolt, Naxdinta Rubber Rubber, Jabinta Steering Front,